Chad oo lagu tuhmayo taageeridda Seleka - BBC Somali
Chad oo lagu tuhmayo taageeridda Seleka
Image caption Qaar ka mid ah dadka ay dhibaatada ka soo gaartay colaada ka taagan Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidammada waddanka Chad ay taageerayaan fallaagada Seleka ee ka dagaalanta Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Kooxdan u ololeysa xuquuqda ayaa sheegaysa in ciidammada Chad ay fududeynayaan dhaqdhaqaaqa iyo sodcaalka Seleka, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay sii wadaan weerraro lagu qaadayo dadka rayidka ah.
Waddanka Chad ayaa waxa uu ka mid yahay tiro wadammo Afrikaan ah oo ciidammo nabad ilaaliyaal ah ugu deeqay howlgalka Midowga Afrika, kuwaasi oo la daalaa dhacaya sidii ay u gaari lahaayeen goobaha ka baxsan caasimadda, Bangui.
Fallaagada Seleka ayaa dib ugu guratay waqooyiga Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, kaddib markii ciidammada nabad ilaalinta Afrika ay gaareen magaalada Bangui.
Markii ay u sii socdeen waqooyiga waddankaasi, ayaa sida ay sheegayso Human Rights Watch waxa ay fallaagadu galeen tacaddiyo ka dhan ah dad rayid ah.
Image caption Qaar ka mid ah dadka ay saameysay dhibaatada ka taagan waddanka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Todobaadkii la soo dhaafay dagaalyano ka tirsan jabhadda Seleka ayaa la sheegay in ay ku qabteen magaalada Subut saddex nin oo Kirishtaan ah, kuwaasi oo jirdil shan saacadood socday ay u geysteen si ay uga sheegsiiyaan halka ay joogaan maleeshiyada Kirishtaanka ah ee lagu magacaabo, anti-Balaka.
Human Rights Watch ayaa sheegtay in markii dambe saddexda ninba la dilay.
Sida ay weerraradaas u dhacayaan ma ahan mid cusub.
Sidoo kale waxaanan cusbeyn eedaha ah in ciidammada nabad ilaalinta ee Chad ay taageero u fidiyaan fallaagada Seleka.
Bishii la soo dhaafay, koox Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in ay jiraan caddeymo muujinaya taageerada ay ciidammada Chad ee ku sugan gudaha Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, ay u fidiyeen jabhadda Seleka.
Waxaa su'aal la galiyay sida ay dowladda Chad dhexdhexaad uga tahay colaada ka aloosan waddanka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, iyadoo si joogta ah loogu eedeeyo in ay taageerto Seleka, eedahaasi oo ay Dd'jamena diidan tahay.
Ma ay jirto cid rumaysan in colaada baahsan ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay dhamaanayso xilli dhow.
Hasayeeshee warbixintan ugu dambeysay ayaa waxa ay shaki weyn galinaysaa waxtarka howlgalka ciidammada nabad ilaalinta ee waddankaasi ku sugan.
Samba-panza: Madaxweynaha CAR
Nin hilib dad ku cunay CAR
Dagaalo ka socda J Afrikada Dhexe
Mustaqbalka madaxweynaha CAR
9 Jannaayo 2014